ဗာ ပုံပြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဗာ ပုံပြင်
Posted by ဆူး on Sep 24, 2011 in Short Story | 27 comments
ဆူး စိတ်ကူး ဗာပုံပြင်
ဗာရာဏသီပြည်မှာ ဗာမင်းကြီး စိုးစံသတဲ့
ထိုတိုင်းပြည်ကြီးကို ဗာတိုင်းပြည်ကတော့ ဗာပြည်လို့ နာမည်တွင်သတဲ့..
ဗာတိုင်းပြည်မှာ လုလင်တယောက်က ဗာသီးကြီး တလုံးကို ရပြီး ထူးဆန်းလွန်းလို့ ကိုယ်တိုင် မစားရက်တာနဲ့ ဆုတော် လာဘ်တော်များ ရလေမလားလို့ ဗာတိုင်းသား တယောက်က လာပြီး ဗာမင်းကြီး ထံ ဆက်သသတဲ့..
ဗာမင်းကြီးက ဗာသီးကြီးကို ကြည့်ပြီး.. တအံ့တသြ ဖြစ်သွားပုံများ အသံတောင် ထွက်လို့.. ဗာ… ဆိုပြီး အကျယ်ကြီး အော်လိုက်မိသတဲ့.. ဗာ ဆိုတဲ့ အသံ အဆုံးမှာ
ဗာ အမတ်တွေကလည်း ဗာမင်းကြီးနဲ့ အပြိုင် အံသြလွန်းလို့ ဗာ.. ဆိုပြီး အော်လိုက်ကြတာ.. ဗာမင်းကြီးရဲ့ ဗာနန်းတော်ကြီး တခုလုံး ဗာဖြစ်သွားမှန်း မသိ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ပရိတ်သတ်တို့ရေ.. ဗာတိုင်းပြည်က ဗာမင်းကြီး နဲ့ ဗာအမတ်တွေ ဗာတိုင်းသား လာဆက်တဲ့ ဗာသီးကြီးက ဗာဖြစ်မလဲ ဆိုတာ သိကြသလား..
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ… နောက်နေ့မှ နောက်တပုဒ် ဆက်ပြောမယ်။
ဗန်ဒါသီး ပဲ ဖြစ်ရမယ်
ဗာ မှ လုပ်ချင်ပါဝူးဆို..
ဗာ ပုံပြင် လာပြောပြီး
ဗာ သီးလဲ ချင်းချားခိုင်းနေတယ်…
ဗာ မှ မစဉ်းစားဘဲ ကြောလိုက်မယ်…
ဗာ … တွေကို မြင်တော့ ဆယ်တန်းတုန်းက ဘိုင်အိုကျူရှင်ဆရာမကို သတိရသွားတယ် … သူက စာသင်ရင် ဗာ တွေကို သိပ်သုံးတယ် … ဗာ ဂျေးလဲ … အယ်ဂျေး …
ဆူးရဲ့ စာစုလေးတွေမတွေ့မိလို့ မအားရှာဘူးနေမှာလို့တွေးမိနေတာ။ဟော…. အခုတော့ တွေ့ရပြီ။
ထင်တာကို ရမ်းကြိတ်ရရင် ” ဗာသီး” မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ “ဘာသီး” များလား
“ဘာသီး” မှ မဟုတ်ရင်တော့ သေချာတယ် “ဘူးသီး”
ဗာသီးကြီးကို ဘာလဲလို့ ဘယ်သူမှမသိခင် ဗောင်းဆိုပေါက်သွားလို့ ဗာသူဗာသားများ ဘုမ္မစိုးအဖြစ်နဲ့ ဘုံဗိမ္မာန်ပေါက်သူပေါက်၊ ဘင်ပုပ်ငရဲကျသူကျ၊ ဗျိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘဝ ရောက်သူရောက် ဘေးဖြစ်ကုန်မှ ဗုံးသီးကြီးမှန်း ဘောပေါက်ကုန်ကြတယ်လို့ ဗျစ်ရည်မူးနေတဲ့ ဘုဂျော်လကီကို ဗဒင်သီချင်းနဲ့ ဘုံးပလပေါ ဗျင်းလိုက်တဲ့ ဘစ်စစ်နက်စ်မန်း ဘိတ်သား ဘုံပြတ်ဘမောင်က ဘဘကြီး ဘန်းထားတဲ့ ဘုတ်အုပ်ထဲမှာ ဘိုလိုရေးထားပါတယ်။
ဗာကြောင်..ကတော့ ဗာတွေပြောသွားမှန်း သေချာမသိဘူး။ ကိုယ်တောင် အပေါ်က ဗာပုံပြင် ကို ဖတ်ရတာ ဗာလိုလို ဖြစ်နေတုန်ရှိသေးတယ် ။အောက်က အောင်ကြူးရဲ့ဒေါင်ချူးနေတဲ့ဗာစကားတွေမှန်းမသ်ိတာကို ထပ် ဖတ်လိုက်ရတော့…ရင်ထဲမှာ ဗာ တာတာကြီး ဖြစ်သွားတယ် ။
ဗာမင်းကြီးကတော့ သူကြီးခိုင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဗာအမတ်ကြီးက တော့ ကြောင်ကြီးပေါ့ကွယ်။
ဗာသီးကနေ ဗာဒံသီးဖြစ်သွားတာပေါ့ ………..
ဗာမထီကြောင်ကြီး ဗီ(ဘီ)ယာသောက်လို့ ဗိုက်ကြီးပြီး ဗင်(ဘင်)ဘုတ်မှာ ဗာမှလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို ဗုဒ္ဗေါလို့တောင် မတနိုင်ဖြစ်မယ်။
ဗာမထီခင် ဗုတ်အုပ်ထုတ်ပြီး ဗယ်သူ ဗာဖြစ်လဲ ဆိုတာ မှတ်ထားသင့်တယ်။
ဗဒင်သီချင်း ဗုံတီး ဆိုရင်း ဗျိုင်းနား မင်္ဂလာ လုပ်မလို့လား။
ဒို့ရွာက ဗာဂျီး(သဂျီး) က ကောင်းပါသေးတယ်.. ဗာဂျီး အသစ် အတွက် ဗျိုင်းမလွတ်စေနဲ့။
Mandalay Gazette ၏အရည်အသွေးကျဆင်းလေမည်လားဟု”ကိုယ်ဟာကိုယ်တွေးမိ၏”
ဒီစကားပြောချင်လို့ အကောင့်လုပ်ပြီး လာမန်းတာလား..
ပထမဆုံး ကွန်မန်းလေး ဆိုတော့ လူသစ်ကလေးပေါ့…
Mandalay Gazette ၏အရည်အသွေးကျဆင်းလေမည်လားဟု”ကိုယ်ဟာကိုယ်တွေးမိ၏”))))
လိုရင်းမရောက်တဲ့ စာကို အချိန်ကုန်ခံ ငွေနှမြောခံ ဖတ်ပြီးများ အချိန်ထပ်ပေးပြိး အကောင့်အသစ်လုပ်ဖို့ အချိန်ထပ်ပေးရတယ်လို့.. တော်တော် ဦးနှောက်ကျပ်မပြည့်တဲ့ လူစားထဲမှာများ ပါလေမလား။.. မကောင်းတာကို မကောင်းမှန်း သိရင် နောက်ဆုတ်ရတယ် ဆိုတာ အသိပညာရှိတဲ့ လူတိုင်းသိတယ်။ မကောင်းဘူးလို့ ပြောနိုင်ဖို့ အကောင့်အသစ်လုပ်ပြီး အီးမေးကတဆင့် အကောင့်အတည်ပြုပြီးမှ စာရေးလို့ ရတာဆိုတော့ အချိန်များစွာပေးပြီး လာပြောနေတယ်။ အခု ကွန်မန်းပေးတဲ့ S.kyaw လည်း အချိန်မပေးနိုင်ရင် နောက် ဆူး ဆိုတဲ့ ကလောင်မြင်ရင် လာမဖတ်နဲ့ ဦးနှောက်ကောင်းရင် နာမည်မှတ်ထား.. ဆူး တဲ့.. နောက်ရှောင်ဖတ်လို့ ရအောင်.. ဟုတ်ပြီလား။ အကျိုးရှိမဲ့ စာတွေ ရှိတဲ့ ဆိုဒ်ကိုသာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း သွားပြီး ဖတ်သင့်တယ် အခုဆိုလည်း ဆိုဒ်တော်တော် များများ ပွင့်နေပြီ ဖြစ်တော့ သတင်းနဲ့ ဗဟုသုတတွေ များစွာ ရှိတဲ့ ဆိုဒ်တွေ ရှိတယ်။
စာကိုဖတ်ပြီးမှရေးလို့ရတာဆိုတော့ S.kyaw ဟာရေးသူရဲ့စာဖတ်ပရိတ်
စုံထောက်ကြီး ဆူးမ ရဲ့ 
ဆူးမ ကို မနာလို တာ အဖြစ်များလာတော့
သူ့ ခဗျာ လည်း
ခိုးစရာ က ရှားပါးလာပြီ မလား
ဒီတစ်ယောက်က ကိုပေ ထင်တဲ့.. တဆာဆာ အော်တဲ့ တစ်ယောက် မဖြစ်လောက်ဖူး ထင်တယ် … သူ့ရဲ့ စာရေးပုံကြည့်ပြီးပြောတာပါ .. ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ … ကာယကံရှင်ပဲ သိလိမ့်မယ် … ။
ဒါချို တူက ဘူရဲဟင် (ကိုပေါက်ဖော် @ ကိုပေါက်ကျော် စတိုင်ဖြင့်)
ဘာတိုင်းပြည်မှာ ဘာမင်းကြီး စိုးစံ တုန်းက ဘာသီးကြီးမှန်းမသိ ရေထဲမျောလာတာ တွေ့ လို့ ဆယ်ပြီး ဘာဓါးကြီး နဲ့ ခွဲကြည့်လိုက်ရာ အထဲမှာ ဘာမှ မရှိဟူ
ဗာပဲရေးရေး ဆက်ပြီရေးပါဗျိုး စာရေးကောင်းတဲ့သူဟာ ဘယ်သူဗာ ပြောပြော ကိုယ်အလုဎ် ကိုယ်ဆက်လုဎ် ပါဗျိုး
အခု တလော သိပ်မအားဖြစ်နေလို့ ရွာထဲသိပ်မ၀င်ဖြစ်တာပါ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုချို တယောက် မြန်မာလို ရေးတတ်နေပြီနော်..
မြန်မာလို ဖတ်ရတာ ပိုပြီး အားရပါးရ ရှိလှတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆူး အလုပ်များနေလို့ ရွာထဲကို အချိန်ပေးနိုင်တာ လျော့သွားတာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်လို အခြေအနေလာအုန်းမလဲတော့ မသိသေးပါဘူး။
ဗမာပြည်ကိုချစ်ပါ ဗမာစကားကို လေးစားပါ (လုဎ်တလို မဖြစ်လို ဖြစ်တလို လုဎ်လိုက် ရပါတယ်)
using burglish :D
Good on you, Ko Cho.
fri !!! sent me message if u donate to mg next time ,thanks for ever
ဦးဖောကြီးလည်း အဲလို လုပ်ပြီး ရေးပါလား..
တစ်နေ့ တော့ မင်းပြန်လာဦးမလား
တင်ပါဦးလား ( ပို့ စ်တွေ )
အောင်လနဲ့ ခေတ်ပြိုင်..မန်းလေးက အောင်ပေဖြစ်ပါတယ်..
ဗာပုံပြင်ဖတ်ပြီး ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာတုန်းဗျ။ဘာမှကိုမသိတော့ဘူး။ကျနော့်အထင်တော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဗာဘုရင်တွေ စားမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒိအသီးက ဘောသီး အဲလေ ဂွေးသီးပဲဖြစ်ရမယ်။
နန်းရှင် က တော့
သူစားချင်တာ ကို တန်းပြောတော့တာပဲ